प्रचण्ड-माधव र जसपा नेताहरु बीचको भेट : प्रचण्ड-माधव पक्षको पार्टी कुन हो ? जसपाको प्रश्न ! - Malayakhabar
होम पेज फिचर प्रचण्ड-माधव र जसपा नेताहरु बीचको भेट : प्रचण्ड-माधव पक्षको पार्टी कुन हो...
काठमाडौं:= नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरुबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ ।
बिहीबार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा नेकपा अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको हो ।
छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानको निम्ति नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो । छलफलमा जसपा नेताहरुले प्रचण्ड–माधव पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आफूहरुले नेकपाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बताएको पनि वरिष्ठ नेता महतोले बताउनुभयो ।
बरिष्ठ नेता महतोले भन्नुभयो ‘हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरु, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायतले अहिलेपनि बन्दी जीवन विताईरहेका छन् । यी सवालहरु छन । यी समस्याहरु छन् । त्यसैले आगामी दिनमा हामी यी सवालहरु हाम्रो प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं र आगामी दिनमा पनि उठ्ने छौं र यसको लागि संघर्ष गर्छौं । संविधानमा रहेका त्रुटिहरु, कमिकमजोरीहरु र बन्दी रिहाइका सवालहरु समेत जुनसुकै सरकार बनेपनि त्यसको अगाडि संघर्ष गर्ने हो । विगतमा पनि संघर्ष गरेको हो । आगामी दिनमा पनि संघर्ष गर्ने हो । यही कुरा भन्यौ ।’
अघिल्लो लेख सबिनाको उपचारको लागि मलेसियाबाट आर्थिक सहयोग प्रदान।
पछिल्लो लेख गायिका अन्जु पन्तले गरिन् प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे।